GuJingGong Doro - Dhizaini magazini
Doro Idzo tsika dzetsika dzakapihwa nevanhu dzinoratidzwa panopakurwa, uye mapatani ejira yekumwa shato anodhonzwa zvine hunyanzvi. Dhiragoni inoremekedzwa muChina uye inomiririra auspfulness. Mumuenzaniso, Dhiragoni inobuda kuzonwa. Nekuti inokwezva newaini, inodzungaira ichitenderedza bhodhoro rewaini, ichiwedzera tsika dzekare senge Xiangyun, imba yamambo, gomo nerwizi, iyo inosimbisa iyo ngano yeGujing mutero waini. Mushure mekuvhura bhokisi, pachave nemusara wepepa rekadhi nemifananidzo yekuita kuti bhokisi rive nemhedzisiro yekuratidzira mushure mekuvhura.
Zita rechirongwa : GuJingGong, Vagadziri zita : Cheng Tian Sheng, Izita remutengi : YUTO.
Doro Cheng Tian Sheng GuJingGong